တရုတ် radial INSERT စက်, Universal radial INSERT စက်, Panasonic က radial INSERT စက်ထုတ်လုပ်သူ
ဖေါ်ပြချက်:radial INSERT စက်,universal radial INSERT စက်,Panasonic က radial INSERT စက်,Panasonic က INSERT စက်,,
Home > ထုတ်ကုန်များ > Panasonic က INSERT စက်
Panasonic က INSERT စက် ၏ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကျနော်တို့တရုတ်, radial INSERT စက်, universal radial INSERT စက် ပေးသွင်း / စက်ရုံထဲကနေအထူးပြုထုတ်လုပ်သူ, Panasonic က radial INSERT စက် R & D နှင့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏လက္ကားအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်, ငါတို့သည်စုံလင်သောရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်နည်းပညာပံ့ပိုးမှုရှိသည်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျှော်ကြည့်ပါ
Panasonic က radial စိတျအပိုငျး INSERT စက် RL132 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AV131 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RL131  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AVK2 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AVK3 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က radial စိတျအပိုငျး INSERT စက် RHS2B Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RH5  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Pansonic radial INSERT စက် RH3  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က Axial စိတျအပိုငျး INSERT စက် AV132 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကခဲအစိတ်အပိုင်း INSERT စက် RHS  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic ကစိတျအပိုငျး INSERT စက် JVK3  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
Panasonic က radial စိတျအပိုငျး INSERT စက် RG131 Lead  အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အင်္ဂါရပ်များ အဆိုပါ RL132, 0,14့/ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလိမ္မာအချိန်တွင်မြန်နှုန်းမြင့်သွင်းနိုင်စွမ်းလမ်းညွှန် pin ကိုစနစ်တစ် radial အစိတ်အပိုင်းသွင်းစက်ဖြစ်ပါတယ် အရာကိုလည်းစွမ်းအင်နှင့်လျှော့စစ်ဆင်ရေးဆူညံသံချွေတာမှု။ 1.High မြန်နှုန်းနှင့်...
အဆိုပါ AV131 မြင့်မားတဲ့စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်များကို 0,12့/ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလိမ္မာအချိန်တွင်မြန်နှုန်းမြင့်သွင်းနိုင်စွမ်းတဲ့ VCD ကို axial ခဲအစိတ်အပိုင်းသွင်းစက်ဖြစ်ပါတယ်။ မျိုးစုံသွင်းအားစု (120 သွင်းအားစု)...
အင်္ဂါရပ်များ အဆိုပါ RL131 မှာမြန်နှုန်းမြင့်သွင်းနိုင်စွမ်းလမ်းညွှန် pin ကိုစနစ်တစ် radial အစိတ်အပိုင်းသွင်းစက်ဖြစ်ပါတယ် ထို့အပြင်စွမ်းအင်နှင့်လျှော့ချစစ်ဆင်ရေးဆူညံသံချွေတာမှုအရာ 0,17့/ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအလိမ္မာအချိန်။ high-speed နဲ့...
အင်္ဂါရပ်များ 1.Longitudinal အစိတ်အပိုင်းလမ်းခွဲ con-tinuous စစ်ဆင်ရေးများအတွက်လမ်းခွဲရထားစွမ်းရည်တိုးမြှင့်။ 2.AVK2 ရဲ့ Split ကိုလမ်းခွဲရထားစနစ်ကသိသိသာသာစစ်ဆင်ရေးနှုန်းကိုတိုးပွားစေပါသည်။ 3.This နေဆဲ Panasert စီးရီး၏ကုန်သွယ်ရေး-အမှတ်အသားကျပန်း...
အင်္ဂါရပ်များ သိသိသာသာတိုးတက်ကုန်ထုတ်စွမ်းအား ကုန်ထုတ်စွမ်းအားအတွက်•ပြဇာတ်တိုးတက်မှု 0,12့/ အစိတ်အပိုင်းမှာမြန်နှုန်းမြင့်သွင်းခြင်းဖြင့်နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ •အောက်ပါကိုလည်းကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူဖြစ်စေ, 1) ကြှေးမှေးရထား 1...
ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးအစား: RHS2B 1. မြန်နှုန်း: 0,17 S က ထိန်သိမ်းနှင့်အတူအသငျ့ 2. : +40 40 ဘူတာ အစိတ်အပိုင်းများ 3. အမျိုးအစားများ: 2.5mm / 5.0 radial တိပ် 4. Power: 3P / 200V /45. အရွယ်အစား: 4460/1900/1855 မီလီမီတာ 6. အလေးချိန်: 2150kg Baoan...
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Model ID RH5 PCB dimensions (mm) M: 50 x 50 to 330 x 250 LL: 50 x 50 to 508 x
ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးအစား: RH3 1. မြန်နှုန်း: 0,36 S က ထိန်သိမ်းနှင့်အတူအသငျ့ 2. : 40/62/80 ဘူတာ 3. Components အမျိုးအစားများ: 2.5mm / 5.0 radial တိပ် 4. Power: 3P / 200V /55. အရွယ်အစား: 5160/2110/1600 မီလီမီတာ 6. အလေးချိန်: 3000kg 7....
အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ တခါမှာနှစ်ခု PCBs ကို run 1.Reduce ဝန်အချိန် သွင်းနှုန်း 2.Low ကုန်ကျစရိတ် 3.Easy-to-အသုံးပြုမှု touch panel ကို 4.0.12့/ component တစ်ခုမြန်နှုန်းမြင့်သွင်း 5.Highly အကျိုးရှိစွာထုတ်လုပ်မှု 6.High...
device မော်ဒယ်များ: အ RHS 1. မြန်နှုန်း: 0.25 S က ထိန်သိမ်းနှင့်အတူအသငျ့ 2. : 80 ဘူတာ အစိတ်အပိုင်းများ 3. အမျိုးအစားများ: 2.5mm / 5.0 radial တိပ် 4. Power: 3P / 200V / 8 5. အရွယ်အစား: 3150/2210/1560 မီလီမီတာ 6. အလေးချိန်: 2300kg Insertion Rate...
အင်္ဂါရပ်များ & အကျိုးကျေးဇူးများ 1.Higher သွင်းအမြန်နှုန်းနှင့်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေ 2.Complete Self-ဆုံးမခြင်း function ကိုမြင့်မားတဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသေချာ ကုန်ကျစရိတ်အပြေး၏ 3.Reduction 4.Operability တိုးမြှင့် 5.Global...
တရုတ်နိုင်ငံ Panasonic က INSERT စက် ပေးသွင်း
Panasonic က ပို. ပို. ကျယ်ပြန့်စျေးကွက် segments များ၏တောင်းဆိုချက်များကိုလိုက်လျောညီထွေအတွက် manufacturers` စိန်ခေါ်မှုများနားလည်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့် Panasonic က high-သိပ်သည်းဆနှင့်မြန်နှုန်းမြင့် Arena, နှင့် built-in Jumper wire ကိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နဲ့တိုးချဲ့ axial ဖြေရှင်းချက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် Jumper wire ကိုနှင့် radial ဖြေရှင်းချက်ထည့်သွင်းမယ့်ဘုံပလက်ဖောင်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။
radial INSERT စက် universal radial INSERT စက် Panasonic က radial INSERT စက် Panasonic က INSERT စက် No.NM-8824C radial INSERT စက်